Akụkọ - Ike Weichai, Na - eduga Generator Na - eweta Generator Kacha Ego
Ike Weichai, Na - eduga Generator Na China Na Ego Dị Elu
Na nso nso a, enwere ozi klaasị ụwa na ngalaba injin China. Ike Weichai kere onye na-eme mmanụ diesel nke mbụ na arụmọrụ arụmọrụ karịrị 50% na ịmara ngwa ahịa na ụwa.
Ọbụghị naanị arụmọrụ ọkụ nke igwe ahụ karịrị 50%, mana ọ ga - enwekwa ike ịchọta ihe ọpụpụ VI / Euro VI na - achọpụta ma mepụta nnukwu ihe. Refeyim ndị ọzọ dị ka Mercedes Benz, Volvo, Cummins mmanụ dizel nke otu arụmọrụ ahụ ka nọ n'ọkwa ụlọ nyocha, yana iji nweta ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ. Iji mee igwe a, Weichai etinyela afọ 5, ijeri 4.2 na ọtụtụ puku ndị ọrụ R & D. O meela otu narị afọ na ọkara kemgbe 1876 na arụmọrụ ọkụ nke isi mmanụ dizel na ụwa amụbawo site na 26% ruo 46%. Ọtụtụ n'ime ụgbọ ala mmanụ ụgbọala anyị agafebeghị 40% rue ugbu a.
Igwe ọkụ nke 40% pụtara na 40% nke ume mmanụ nke injin ahụ gbanwere n'ime ọrụ mmepụta nke crankshaft. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, oge ọ bụla ị banyere na gas gas, ihe dị ka 60% nke ume mmanụ ala n'iyi. Ihe 60% a bụ ụdị ọghọm a na-apụghị izere ezere
Yabụ, nke dị elu na arụ ọrụ ọkụ, obere mmanụ ọkụ, mmetụta dị ukwuu nke ịchekwa ike yana mbelata nsị
Igwe arụmọrụ nke injin diesel nwere ike ịgafe 40% n'ụzọ dị mfe ma gbalịsie ike iru 46%, mana ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njedebe. N'ihu, nyocha ọ bụla nke 0.1% ga-eme nnukwu mbọ
Iji mepụta engine a na arụmọrụ nke 50.26%, Weichai R & D otu rụzigharịrị 60% nke ọtụtụ puku akụkụ na injin ahụ
Mgbe ụfọdụ, ndị otu a nwere ike meziwanye arụmọrụ ọkụ site na 0.01% na-enweghị ihi ụra ruo ọtụtụ ụbọchị. Fọdụ ndị na-eme nchọnchọ na-achọsi ike nke na enyemaka dị ha mkpa. N'ụzọ dị otú a, ndị otu ahụ weere mmụba 0.1 ọ bụla na arụmọrụ ọkụ dị ka ọnụ, gbakọtara ntakịrị, ma gbasie ike. Fọdụ ndị na-ekwu na ọ dị mkpa ịkwụ ụgwọ dị elu dị otú ahụ maka ọganihu. Ihe a 0.01% nwere uche ọ bụla? Ee, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya, ịdabere na mpụga nke ndị China na 70.8% na 2019.
N'ime ha, engine nke combustion (engine dizel + mmanụ ụgbọala) na-erepịakwa 60% nke oriri ngụkọta China. Dabere na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ugbu a nke 46%, arụmọrụ ọkụ nwere ike ịbawanye na 50%, na mmanụ dizel nwere ike belata 8%. Ka ọ dị ugbu a, enwere ike ịkwalite igwe mmanụ dizel nke China na 10.42million tọn kwa afọ, nke nwere ike ịchekwa 10.42million tọn carbon dioxide. 33.32 nde tọn, nke ruru otu ụzọ n'ụzọ ise nke mkpokọta mmanụ dizel nke China na 2019 (nde tọn 166.38)